I-Collett Cottage - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Joshua
Ikhaya elithokomele lamakamelo okulala amabili atholakala endaweni enhle, enomlando we-Collett Park. Eduze ne-Collett Park, i-Union Hospital, amaphoyinti angu-12 Esifunda Esingokomlando, izitolo zokuthengisa, ukudla, amakhemisi, nezindawo zokudlela. Umshini wokuwasha/wokomisa, ikhishi eliphelele, nezaphulelo zokuhlala isikhathi eside kwenza kube yindawo ekahle yezisebenzi zezempilo ezisebenza e-Union Hospital, noma ubani ofuna ukuhlala isikhashana e-Terre Haute.
Izivakashi zingajabulela wonke amasevisi aleli khaya elingamafidi-skwele angu-1000. Indawo yekamelo lokuphumula inikeza i-Fire TV nosofa wesimanje. Le ndawo iphinde ibe nedeski nesihlalo sanoma ngubani odinga indawo yokusebenzela.
Amakamelo amabili womabili antofontofo kakhulu ngokuxuba izindwangu zesimanje nokuthinta izinto zakudala.
Indlu yokugezela ingena ngekamelo elikhulu noma ikhishi.
Ikhishi liqukethe indawo yokudla engajwayelekile kanye nezinto zikagesi eziningi zekhishi elincane.
I-Collett Park itholakala emabhulokhi amabili entshonalanga kanye nezakhiwo ezintathu eningizimu. Lena indawo enhle yomndeni enethenisi, ibhola lokukhetha, nenkundla entsha ye-futsol. Kukhona inkundla yokudlala enhle kakhulu, imigomo yebhola lezinyawo, nendawo yokudlala amahhashi. Ngaphezu kwalokho, kunezindawo zokukhosela ezinamalahle zokuzilibazisa komndeni noma amaphathi osuku lokuzalwa. I-Maple Street Park iseduze futhi ihlanganisa ichibi lokudoba, indawo yokudlala, kanye nomzila omuhle wokuhamba/wokugijima/wokugijima ngebhayisikili echibini.
Ikhaya liphinde libe kude nendawo engokomlando ye-Twelve Points enamabhizinisi amasha amaningana ahlanganisa indawo yokudlela ye-Great Giorno, i-Ferm Fresh (ene-ombucha etephini), Isitolo sokuqopha i-Vinyl yasendaweni, isitolo se-pie, isitolo sezinto zakudala, nesitolo sezinongo.
Kukhona i-Troger eseduze uma ukudla kudingeka kuthengwe, kanye ne-CVS kumaphuzu ayishumi nambili.
Siseduze uma kudingeka kodwa sizokuvumela ukuba uqedele ubumfihlo.